Dr. Tint Swe's Writings: September 2016
ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် ၃၅နှစ် ရှိပြီး အပျိုပါ။ အသက် ၂၇ နှစ်တုန်းက သားအိမ်အလုံးဖြစ်လို့ ခွဲထုတ်ထားဘူးပါတယ်။ အခု ရာသီလာရင် ဗိုက်အရမ်းအောင့်ပြီး စအိုဘက်ကလည်းနာ ပါတယ်ဆရာ။ အဖြူလည်း ဒီကြားတယ်မှာနည်းနည်းနဲ့ ရက်ကြာကြာ ဆင်းနေလို့ ဆေးခန်းပြန်ပြပြီး အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်တော့ အသားလုံးအသေးတွေ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ ရာသီလာလို့ နာရင်းသောက်ဖို့ ဆေးပေးပြီး ခြောက်လနေမှ ပြန်ပြဖို့ချိန်းပါတယ်။ အခုက ကျွန်မ ညာဘက်ဗိုက်အောက်ပိုင်းက အောင့်ပြီး ခါးကနေပေါင်လောက်အထိကို တော်တော် နာနေပါတယ်ဆရာ။ အသားလုံး ရှိနေလို့ အဲ့လိုဖြစ်တာလားဆရာ။ သမီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာမှန်း မသိလို့ ဖြေကြားပေးပါအုံးနော်။ အမှားပါတာရှိလည်း ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်။ သမီးရဲ့ အာလ်ထွာဆောင်းအဖြေနဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားပေးထားတဲ့ ဆေးပါဆရာ။
အလုံးဆိုတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာသက်သာဆေး တခုခုသောက်ပါ။ အာလ်ထွာဆောင်းအဖြေ မသိပါ။ အဖြူဆင်းတာ အနေရခက်ရင် ထပ်မေးပါ။ Uterine Fibroid Treatments သားအိမ်အကျိတ်ကုသနည်း အမျိုးမျိုးစာ ပို့လိုက်ပါတယ်။
အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လည် ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာလည်း သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေ။ မအားတဲ့ကြားကနေ အခုလို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်ဖြေကြားရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် အမှန်တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂 🙂 အဖြူဆင်းတာက သက်သာပါတယ်ဆရာ။ ရာသီလာရင်နဲ့ လာခံနီးရက်တွေကတော့ နာနေတုန်းပါပဲ။ ညာဘက် ဗိုက်အောက်ပိုင်းကလည်း အောင့်ပါတယ်။ Dolfenal သောက်ရင်တော့ သက်သာပါတယ်ဆရာ။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေရှိရင် သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။ သမီး အလုံး ထပ်ကြီးလာပြီး ဗိုက်ခွဲရမှာ ဆိုးလို့ပါ။
ဆေးပညာစာ ပို့ထားပြီး။ လာခါနီးလို့ရေးရတယ်။ စိုးရိမ်လို့သာ ရေးရတယ်။ ဆိုးသွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်။
ကျွန်မက အခု ၄၂ ပါ။ ခြေမညာဖက်က ခြေသည်းထိပ်ပိုင်းပါးလာပြီး နာပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ခြေမက ဘယ်ဖက်ဒေါင့်က အရေခွံလန်ပြီးနာလဲနာ ခြေသည်းလဲ ပိုးစစားနေပါပြီ။ အဆိုးဆုံးက ညာလက်မ တခြမ်းပုတ်ပြီး နာနေတာ ပန်ကန်ဆေး ဟင်းချက်နဲ့ ပိုဆိုးနေလို့မေးတာပါဆရာ။ ခင်မင်လေးစားစွာနဲ့ပြောရရင် ဆရာကို အားကိုးပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်တိုင်း ဆေးခန်း မသွားနိုင်တာလဲပါတယ်ဆရာ၊ မြန်မာပြည်မှာ အဲ့လောက်နဲ့ ပြည်သူဆေးရုံ သွားမကောင်းသလို အပြင်ဆေးခန်းသွားလဲ ပိုက်ဆံအတွက် အဆင်မပြေလို့ပါ၊ ဆရာ မှတ်မိမလားမသိ၊ ကျွန်မ ဆရာ့ကို ခါးဆစ်ကိစ္စကော လေဖက်နာကိစ္စကော မေးဖူးပါတယ်။ အခုအလုပ်ကနားပြီး ကွကိုယ် တစ်ယောက်တည်းနေပါတယ်။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်၊ ဆရာကျန်းမာပါစေရှင်။
(ကွကိုယ်) ဆိုတာ ကွန်မင့်မှာ အပျော်အပျက်ရေးတာသာဖြစ်တယ်။ အခုလိုစီကာစဉ်ကာရေး မေးတာမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လို့ ရေးသင့်တယ်။
အခုပဲ အန်တီက မေးတယ့့် (မွတ်ငါး) က ဘာလဲတဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေသင်ယူထားတဲ့ ကျွန်တော်က ဆရာလုပ်ပါတယ်။
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုတာ ဆိုရိုးစကားပါ။ မြန်မာစာအရေးအသားနဲ့ ပြောစကား၊ အလေးမထားကြလို့ စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်တော့်လက် သွေးထွက်တဲ့အထိ ရေးပါမယ်။
ဆရာရှင့် သမီးမနေ့က ညနေက စီးဆစ်ကြည့်တာ နှစ်ကြောင်းပေါ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြတော့ နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ ပြောပါတယ်ဆရာရှင့်။ ခုဒီမနက်ကျတာ့ သွေးနည်းနည်းဆင်းနေပါတယ်ရှင့်။ သမီးကကလေးလိုချင်လို့ တားဆေးမသုံးတာ သုံးလလောက်တော့ရှိပါပြီရှင့်။ ခုလိုသွေးဆင်းတာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်လဲ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါဆရာရှင့်။
Pregnancy and Bleeding During Early Stage ကိုယ်ဝန်နုစဉ် သွေးဆင်းခြင်းစာ ပို့လိုက်ပါတယ်။
ဆီးစစ်လို့ ရေးရပါမယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ မြန်မာစာနဲ့ စကားကို အဲလိုမှားနေကြတာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က စာတွေဖတ်တော့ ကွန်မြူနစ်စာပေတွေထဲမှာ ဗော်လဂါမြစ်ရေ နီတွေတွေလို့ တင်စားခဲ့ကြတာဖတ်ရတယ်။ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ကို အားကျထောက်ခံသူတွေက ယန်စီမြစ်နဲ့ ပင်လယ်ဝါကို တမ်းတကြတယ်။ မြစ်တွေကို အရောင်တွေနဲ့ ဖော်ကျူးခဲ့ကြတာပါ။
ကွန်မြူနစ်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော် အသက်ကြီးလာလို့ နိုင်ငံရေးထဲရောက်တော့ သွေးစီးလာတော့တဲ့ ဧရာဝတီနဲ့ ချင်းတွင်းကို ကျောခိုင်းထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ မဏိပူရမြစ်၊ ဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်၊ ဂင်္ဂါမြစ်၊ ယမုန်နာမြစ်တွေဆီရောက်သွားရတယ်။ မောချွေးတွေ ဇောချွေးတွေ စီးကျလာပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်က သံလွင်မြစ်နဲ့ သောင်ရင်းမြစ်မှာ ဗဟိုချက်ထားခဲ့ရာကနေတော့ ဆုတ်ခွါခဲ့ကြရတော့ သွေးရော၊ ချွေးရော၊ မျက်ရည်ပါ စီးထွက်ပါတယ်။
ကနေ့ မြန်မာပြည်ကမြစ်ကြီးတွေ သွေးနီစွန်းသေးလား။ ကြေးဝါရောင်ဖြစ်သွားပြီလား။ စိမ်းပုပ်နေသလား။ နက်မည်းနေပြီလား။
ရိုသေလေးစားရသောဆရာရှင်။ ကျမ္မားရေးမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ခုတခါမေးခွန်းက လူမူရေးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့စာ တော်တော်များများဖတ်ဖူးလို့ ဆရာရဲ့အကြံပေးမူလေး သိချင်ပါတယ်။
ကျမအသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ ဒုတိယကိုယ်ဝန် ၈ လရှိပါပြီ။ ထိုင်းမှာနေပါတယ်။ အဲဒါ မြန်မာပြည်က ထိုင်းမှာ ကလေးမွေးခွင့် မပေးတော့ဘူး။ မွေးရင် မြန်မာပြည်က မွေးစာရင်းလုပ်မပေးတော့ဘူး။ ကျောင်းနေမရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ပြီ ပြောပါတယ်ဆရာ။ ကျမမှာ ပတ်စပို့လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ ကလေး ၂ လလောက် ပတ်စပို့ကျတော့ အိပ်ရာထဲလည်းနေလို့ သက်တမ်းမတိုးလိုက်ရဘူး။ ဘတ်ပဲ့ရိုက်လိုက်နိုင်တယ်။
ကျမလိုပဲ အခက်ခဲပေါင်းများစွာ လူတွေရှိပါတယ်။ ဘတ်ရှိရင် သဋ္ဌေးကထွက်ခံစားပေးရင် အဆင်ပြေပေမယ့် မပေးတော့ အဆင်မပြကြဘူးဆရာ။ မြန်မာပြည်မှာက မိဘမဲ့ကလေးတွေကြောင့် ဆရာဝန်တွေ၊ ကျောင်းဆရာမတွေ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ အဆင်မပြေဖြစ်လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ တချို့ကလည်း မွေးပြီးပြန်လာမယ်ပြောပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင်လည်း ဘာကွာခြားလို့လည်း။ မွေးပြီးတလနှစ်လထားလည်းတူတူ၊ ကျမတော့ သားဦးလေးကို ၃ နှစ်မှ သွားထားခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ ခုကိုယ်ဝန်က ၈ လဆိုတော့ အခက်ခဲတွေကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ မိခင်တွေအားလုံးအတွက် ဆရာရဲ့ အကြံပြုမှုလေး ပြောပြပေးပါရှင်။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်သီးခံပေးပါဆရာ။ ရိုသေလေးစားလျှက်။ ထိုင်းနိုင်ငံကမိခင်များ။
စာရေးတဲ့သတ်ပုံအမှားတောင်မှ ဆရာမတတ်နိုင်။ နိုင်ငံရေးသတ်ပုံပြင်ဘို့ဟာ ၂၅ နှစ်ကြာတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကမိခင်တွေအတွက် ပြောပြတဲ့အခက်အခဲအတွက် လုပ်ပေးရမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကများတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် စီးပွါးရေးနဲ့ ဆိုင်တယ်။
မနေ့က ဒေါ်စု မောင်းထုတာပုံ တွေ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မုံရွာ၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ဘုရားကြီးပွဲတော်မှာ ရောင်းတဲ့ ကလေးကစားတဲ့မောင်းကို ထုလိုက်ပါတယ်။ ရွာဆော်တွေကလည်း အော်ပေးကြပါခင်ဗျား။
ကွန်မင့်မှာ ပုံတခုလာတယ်။ စာတွေနဲ့။ သဒ္ဓါလို့ရေးရမှာ မှားနေတယ်။ သဒ္ဒါဆိုရင် (ဂရမ်မာ) ဖြစ်သွားမယ်။ ပုံကို ခဏနေရင်ဖျက်ပါမယ်။
ကျွန်တော်က ကွန်မင့်မှာ ပုံတွေလာတာ သဘောမကျပါလို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရေးထားပါတယ်။ သူများလုပ်ထားပြီးသားပုံတွေ ခဏပေါင်းများစွာ တင်နေကြ၊ ရှယ်နေကြတာက အီနောက်လာတယ်။ ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ ကြိုက်-မကြိုက်၊ ကောင်း-မကောင်းရေးတာကို ပိုအလေးထားပါတယ်။
သတ်ပုံအကြောင်းရေးတာတာလည်း သူများမျက်စိနောက်မှာ သိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာရေးကြတာ ကျွန်တော့်မှာ တားခွင့်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာ သုံးတာမှန်သမျှတော့ ပြင်ပြီးမှသာ သုံးပါမယ်။ ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာ ဒါလေးသာရှိတယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ဟင်းချိုမှုန့် သတင်း
ကွန်မင့်တခု = ဆရာကလည်း မသုံးသင့်ကြောင်း တည့်တည့်မပြောဘူး။ ဧည့်သည်လာလို့ စားချင်သူဆိုရင် ပေးဖို့ဝယ်ထားတယ်တဲ့။
ဆရာဝန်ပြောရင် နားမထောင်ချင်။ ပျောက်စေဆရာနဲ့ ကြော်ငြာဆေးမျိုးကို သဘောကျ။ အထက်အမိန့်ဆို ပြားပြားဝပ်လိုက်နာတဲ့အကျင့်က ပါနေကြတယ်။ ကျွန်တော့်မှာက ဆရာဝန်ယူနီဖေါင်းတောင် မရှိတော့ဘူး။ Smile
၁၉၈၁ မှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက တပြေးညီအောင်လုပ်ကြဆိုကတည်းက ခုထိ သတ်ပုံတွေက တစ်အောက်မှာ ပိပြားနေကြတုန်းပဲဗျ။ သူက ယူနီဖေါင်းဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာပါ။ No Smile!
သတင်း = စစ်ကိုင်းကောင်းမူတော်စေတီအား မူလထုံးသင်္ကန်းအတိုင်း အများပြည်သူမှ ဖူးမြော်လိုပါက တိုင်းအစိုးရမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို (ကိုသစ္စာ-မုံရွာ)
ဒီသတင်း ခိုင်မာမှုတော့ သိပ်မသိပါ။
ကောင်းမှုတော်စေတီကြီးကို ရွှေအတုသင်္ကန်းကပ်ထားတာကို အဝေးကြီးကနေ အစောကြီး သဘောမကျပါကြောင်း ကန်တော့ပါဘုရား ခွင့်တောင်းပြီး ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်လာ မလာ မပြောတတ်ပါ။ ဖြစ်မလာလို့လည်း စိတ်ထဲမှာ နေတတ်အောင် နေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က အယူအဆမှာ ခေါင်းမာတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ အဲတာက ဒုက္ခပေးတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေး ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော့်ဖက်က အများအားဖြင့်နိုင်ပေမဲ့ မဲရှုံးတာ တခါတခါရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီမှာ မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ နည်းနာကို ပယ်မရပါ။ လူ ၁၃ ယောက်ရှိတဲ့အသင်းအဖွဲ့တခုမှာ ၅ ယောက်ကို စည်းရုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ရင် လုပ်ချင်တာလုပ်ပေတော့ဆိုတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက် နမူနာတခု ပေးခဲ့ဘူးတယ်။ လူတွေကို သိမ်းသွင်းနည်းက အမျိုးမျိုး။ ဒါကြိုက်သူကို ဒါပေး၊ ဟိုဟာကြိုက်သူကို ဟိုဟာပေး။ ဘေးကနေ သိုင်းမဲ့ဝိုင်းမဲ့သူတွေကလည်းရှိသေး။
အဲလိုခေါင်းမာခဲ့တာ မကောင်းဘူး။ ရွာပြင်ရောက်နေသူ ခြံစည်းရိုးအပြင်ရောက်ပါလေရော။ အခုတော့ နေတတ်ပါပြီ။
မေးခိုင်ပိုးဝင်ရင် ကုလို့ရပါသလားဆရာ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၂၈ ပါ။ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရချင်၍ မေးတာပါဆရာ။ တစ်ချို့နားမလည်သူတွေကို ပြန်ရှင်းပြတာမျိုး၊ ကြားနေမြင်နေရတာတွေမှာ နားမလည်တာလေးတွေ မေးတာပါဆရာ။ မေးခိုင်ပိုးဝင်သူက အသက် ၂၅ ဝန်းကျင် ယောက်ျားလေးပါ၊ သံနဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ၄ ရက်မြောက်မှာ စကားပြောရင် လေးနေလို့ ဆေးရုံအမြန်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ၂၈.၉.၂၀၁၆ ရက်နေ့ကပါ။ လမ်းမှာကြုံတာပါဆရာ။ အဲဒါ သူတကယ်လို့ မေးခိုင်ပိုးဝင်တယ်ဆို ကုလို့ရလား သိချင်ပါတယ်။
မေးခိုင်ရောဂါသည် Gram-positive Clostridium tetani ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ အနာ-ဒဏ်ရာထဲသို့ ၄င်းပိုးဝင်၍ ဖြစ်သည်။ မေးရိုးကြွက်သားများ လှုပ်မရဖြစ်၍ မေးခိုင်ရောဂါဟု လူသိများသည်။ ပိုးဝင်ပြီး ၂-၁၄ ရက်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်သည်။
လူနာခါးအောက်လက်ဝါးထိုးကြည့်လျှင် အိပ်ယာနှင့် ကပ်မနေ။ ဆိုးဝါးပါက ဝမ်းဗိုက်ရှေ့ကကြွက်သားများပင် ပြတ်ထွက်စေနိုင်သည်။ အသက်ရှူရာတွင် အသုံးပြုသည့်ကြွက်သားများ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဖြစ်လာပါက အသက်ကောင်းစွာ မရှူနိုင်ဖြစ်လာမည်။ အောက်စီဂျင်နှင့် အသက်ရှူကရိယာလိုနိုင်သည်။ သလိပ်-ချွဲ မထုတ်နိုင်ဖြစ်လာမည်။ လည်ပင်း ဖေါက်ပေးရနိုင်သည်။ တက်မည်၊ အထူးသဖြင့် အသံကြားပါက၊ အလင်းရောင်မြင်ပါက တက်မည်။ အတက်ဆေး ထိုးပေးရမည်။
• ဆေရုံတက်ကုသရမည်။ လူနာကို မှောင်ပြီးတိတ်ဆိတ်သည့်နေရာမှာထားပါ။
• အသက်ရှူခက်လာလျင် Tracheostomy လည်ပင်းဖောက်ပေးခြင်း၊ mechanical ventilation အသက်ရှူစက် တပ်ပေးရမည်။
• အစာအာဟာရကို ပါးစပ်မှ လုံလောက်အောင် မစားနိုင်ပါက ပိုက်ဖြင့်ထည့်ပေးရမည်။
MSG Criticisms Should Be Taken With A Grain Of Salt ဟင်းချိုမှုန့် သတင်း
ဟင်းချိုမှုန့် ဆေးသုတေသနသတင်း လန်ဒန်နေသူငယ်ချင်းက တင်ထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဟင်းချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်စာတွေရေးထားလို့ သေချာဖတ်ရတယ်။ အဲဒီသတင်းက ၂၆-ဂ-၂ဝ၁၄ နေ့ကထွက်ခဲ့တာပါ။ သတင်းခေါင်းစဉ်က MSG Chinese Food တရုပ်လုပ် ဟင်းချိုမှုန့်လို့ ရေးထားတာနဲ့ ဟင်းချိုမှုန့်ခေါ် Monosodium glutamate (MSG) သမိုင်းကို လှန်ရတယ်။
ဟင်းချိုမှုန့်မှာ အဓိကပါတဲ့ Glutamic acid (ဂလူတားမစ် အက်စစ်) ကို ၁၈၆၆ ကတည်းက ဂျာမန်ပညာရှင် တွေ့ထားတယ်။ ၁၉ဝ၈ မှာ Kikunae Ikeda (အိုင်ကီးဒါး) ဂျပန် ဘုရင့်တက္ကသိုလ်ကနေ အရာသာဓါတုပစ္စည်းအဖြစ် ဖေါ်ထုတ်ပါတယ်။ Laminaria japonica ပင်လယ် ရေမှော်ပင်ကနေ ထုတ်ယူတာပါ။ Katsuobushi နဲ့ Kombu အရသာမှုန့်တွေကိုလည်း (အိုက်ကီဒါး) ကနေ တွေ့တာပါ။ Dashi လို့ခေါ်တယ်။ အရသာသစ်ဟာ ချိုတာလည်း မဟုတ်၊ ငန်တာလည်း မဟုတ်၊ ချဉ်တာလည်း မဟုတ်၊ ခါးတာလည်း မဟုတ်ပါ။ လူတွေက ကြိုက်ကြတယ်။
Aji-no-moto (အာဂျီနိုမိုတို) လို့ခေါ်တဲ့ ကနေ့လူသုံးများလွန်းလှတဲ့ ဟင်းချိုမှုန်ကိုတော့ ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဂျပန် Suzuki ဆူဇူးကီး ညီအကိုကနေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်တယောက်မှ မပါခဲ့ပါ။
ဟင်းချိုမှုန့်သုံးစွဲလွန်းလို့ရလာတဲ့ရောဂါကိုတော့ Chinese Food Syndrome (Chinese Restaurant Syndrome) တရုပ်စာဆင်ဒရုမ်းခေါ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရင် ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ပျို့ချင်မယ်၊ နှလုံးတုန်မယ်။
ဟင်းချိုမှုန့်သုံးစွဲနေခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ပါပြီ။ သုတေသနတွေလည်းလုပ်ကြတာများပါပြီ။ အခုထိတော့ မသုံးစွဲသင့်၊ သုံးလည်းဘာမှမဖြစ် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ စွဲစေတာတော့ မှန်တယ်။ မသုံးရမနေနိုင်သူတွေ၊ အဲတာမပါ ဟင်းမချက်တတ်သူတွေ ရှိတယ်။ အဲတာမပါပဲ ချက်တတ်၊ စားတတ်သူတွေလည်းရှိတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့နဲ့ ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးတို့ သဘောပါခင်ဗျား။ ကျွန်တေ်ာ့အိမ်မှာတော့ ဧည့်သည်လာလို့ စားချင်သူဆိုရင် ပေးဘို့သာ ဝယ်ထားပါတယ်။
Ajinomoto ဟင်းချိုမှုန့် http://doctortintswe.blogspot.com/…/…/sweetening-agents.html
Ajinomoto ဟင်းချိုမှုန့် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/ajinomoto.html
Chicken flavored broth and health risks ကြက်သားမှုန့် နဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/chicken-flavored-broth-…
Dashi and Sweetening Agents ဟင်းခပ်မှုန့်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/ajinomoto.html
အဆာပြေစားစရာ တို့ဟူးသုပ်၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်သူက လာပေးပါတယ်။ အရင်လည်း ပေးတယ်။
ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ရတဲ့ တို့ဖူးကတမျိုး။ ပဲပုပ်စေ့နဲလုပ်တာ။ ပဲပြားခေါ်တယ်။ ဒေလီမှာနေတုန်းက အောက်စ်ဖို့ဒ်ဆရာမကြီးက ပဲပြားကို ဆီတို့ဟူးလုပ်နည်းပြောပြတယ်။ သူက ရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့လို့သိတာ။
နေ့လယ်စာ ကြက်ဟင်းခါးရွက်ချက်တာနဲ့စားရတယ်။ ကနေ့ညနေမှာ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးသူကနေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ လာရောင်းမယ်ထင်တယ်။ ခွေးတောက်ရွက်ပါရင် ဝယ်ရအုန်းမယ်။ ဒီမြို့မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ကပ်ပါမယ်လို့ လျှောက်ထားပြီးပြီ။
အဲတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု။ တယောက်ရှိတာတယောက် ဝေမျှစားကြ၊ ပေးကြကမ်းကြ၊ လှူဒါန်းကြတယ်။ အန်တီ အခုပဲ ဒူးနာကို ဖီဇီကယ်သာရပီလုပ်ပြီးအပြန်မှာ ဈေးဝင်ဝယ်လာတာ။ ငှက်စာ။ ကုန်တိုင်း တအိတ်တအိတ်ဝယ်ရတယ်။ ငှက်တွေကို ကိုယ်က မွေးမြူထားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အဲတာလည်း ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှု။
ကလေးဆယ်ယောက်မှာ တယောက်က အိဒ်စ်ရောဂါကိုခုခံနိုင်
၂၉-၉-၂ဝ၁၆ နေ့ထွက်တဲ့ဆေးပညာသတင်းပါ။ ကလေး (၁ဝ) ယောက်ထဲက (၁) ယောက်မှာ မျောက်လို ခုခံအားစနစ် ရှိကြတယ်။ အဲတာကနေ အိဒ်စ်ရောဂါကို ခုခံကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်။
HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ကလေး ၆ဝ% ဟာ ဆေးမကုပဲနေရင် ၂ နှစ်ခွဲနေရင်သေဆုံးနေကြရတယ်။ အဲလိုကူးစက်ခံရတဲ့ မျောက်တွေကတော့ မသေကြပါ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ခုခံအားစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ ဒီပိုးရှိနေရင် တခြားကူးစက်ပိုးတွေဝင်လွယ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်လာတာကို AIDS ဖြစ်ပြီလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာဆန်းစစ်မှုမှာ တောင်အာဖရိနိုင်ငံက ကလေးပေါင်း ၁၇ဝ ယောက်ကို စမ်းတယ်။ ဒီကလေးတွေက ART ဆေးလည်း မရကြသူတွေဖြစ်တယ်။ AIDS အဆင့်လည်း မရောက်ကြသေးပါ။
အောက်စဖို့ဒ်က ပါမောက္ခ Philip Goulder (ဖိလစ် ဂူလ်ဒါ) ဆိုသူလည်း သုတေသနလုပ်တဲ့အဖွဲထဲမှာပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ စစ်တိုက်ရတာ အမှားအကျူးလွန်တတ်ဆုံးပါလို့ပြောပါတယ်။ HIV ပိုးက ခုခံအားနစ်ရဲ့ စစ်သည်တွေဖြစ်ကြတဲ့ သွေးဖြူဥတွေကို သတ်နေတယ်။ ပါမောက္ခပြောတာက AIDS မှာ HIV နဲ့ဆိုတာထက် ခုခံအားနစ်နဲ့ဆိုင်နေတယ်။
ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ ခုခံအားအခြေခံကုသနည်း ပေါ်ထွက်လာစရာရှိနေပါပြီ။
၁၉၉၄ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၃ဝ) ရက်နေ့ ဒိုင်ယာရီ
ပြင်သစ်သံရုံးသို့ ထပ်သွား၍ ဗီဇာကိစ္စထပ်လုပ်ရ။ (မိန်း ဒက်စတီနေးရှင်း) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟု ရေးခဲ့သည်ကို ပြန်ပြင်ရ။ ဂျာမဏီဟုပြင်ရေး။ (ကာဗာ လက်တား) လိုသည်ဆို၍ မိမိ၏ပဒ်ဖြင့်တစောင် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး (လက်တာဟက်) နဲ့ တစောင်ပေးလိုက်။ အဆင်ပြေ။ ရက် (၉ဝ) ထက်မပိုသော ရက်တိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရတယ်။ (၁၂ဝဝ) ရူးပီးသွင်းခဲ့ရ။ ညနေ (၄) နာရီ ဗီဇာရ။
အဲဒီရက်တွေမှာ ဥရောပယူနီယံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကစီစဉ်တဲ့ အစည်းအဝေးတခုတက်ဘို့ အဝေးရောက်အစိုးရက ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အစည်းအဝေးနေရာက ပြင်သစ်နိုင်ငံ (စထွက်စ်ဘာ့ခ်) မြို့မှာဖြစ်တယ်။ ဂျာမဏီဗီဇာ အရင်လျှောက်ရတယ်။ နောက် ပြင်သစ်ဗီဇာလျှောက်တယ်။ ဥရောပရောက်နေတုန်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရှိရာ ဝါရှင်တန်ဒီစီ ကိုလည်း ဆက်သွားဘို့စီစဉ်တယ်။ ပြင်သစ်ဗီဇာလျှောက်တော့ ပြင်သစ်ကနေ ယူအက်စ်အေအထိ သွားမယ်လို့ရေးတာ ယူအက်စ်အေဗီဇာက မရှိသေးတော့ အရင်နေ့ကသွားတာ အဆင်မပြေခဲ့လို့ နောက်တနေ့ ထပ်သွားရတာပါ။
ဂျာမဏီဘွန်းမြို့ကိုအရင်ရောက်တယ်။ ဒီမိုကရေရေးမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်နေသူ ဦးနွယ်အောင်က အစစအရာရာ ကူညီတယ်။ (ဘွန်း) ကနေ (စထွက်စ်ဘာ့ခ်) မြို့ကိုဆက်သွားတယ်။ ဘွန်းမှာ အမေရိကန်သံရုံးသွားပြီး (ယူအက်စ်အေ) ဗီဇာလျှောက်တယ်။ ၂-၃ ခေါက်သွားပေမဲ့ အဆင်မပြေပါ။ အဲဒီတခေါက် အမေရိကကို မရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။
(၂၂) နှစ်တိတိရှိသွားပြီပဲ့့
သက် = အသက်၊ သက်ရောက်မှု၊ သက်ဆိုင်သူ။ သက္ကတဘာသာ၊ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်၊ သက္ကလတ်စောင်၊ သက်စွန့်ကြိုးပမ်း၊ သက်ဆိုးရှည်၊ သက်တံ့ရောင်၊ သက်တမ်းရှည်၊ ချစ်တဲ့သက်နှံ၊ ချစ်ဖက်သက်လျာ၊ သက်ရင်းကြီးပင်၊ သက်လုံကောင်း၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ သက်သေပြ၊ သက်သောင့်သက်သာ၊ သက်သတ်လွတ်စား၊ သက်ကျားအို၊ သက်ကြီးခေါင်းချအချိန်၊ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်။
သပ် = ပွတ်သပ်၊ သပ်လျှို၊ သပ္ပာယဖြစ်၊ သပ္ပာယ်၊ သပ်ရပ်။
Medical investigation စမ်းသပ်ခြင်းစာလည်းတင်ပြီးရော ကွန်မင့်တခုလာတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါလို့သာ ရေးရတယ်။ ဝေခွဲမရရင် ရက်စ်လို့သာရေး။
ကတ် = ကတ်ကြေး၊ ကတ္တရာစေး၊ ကံ-ကတ္တား၊ ကတ္တားခြား၊ ကတ္တီပါဖိနပ်၊ ကတ်ထူစာအုပ်၊ ကတ်ဖဲ့ဖဲ့လုပ်၊ ကတ်သီးကတ်သတ်၊ ကုတ်ကုတ်ကတ်ကတ်၊ တရုတ်ကတ်တံခါး၊ တုံးပေကတ်သတ်၊ တွက်ကတ်၊ နားကြားပြင်းကတ်၊ ပိဋကတ်၊ ပို့စကတ်၊ ပေကတ်ကတ်၊ မြင်ပြင်းကတ်၊ လက်ပေါက်ကတ်၊ အမြင်ကတ်၊ အလုပ်ခိုကတ်။
ဆရာခင်ဗျာ့ လူနာကအမျိုးသမီးပါ။ အသက် ၃၆။ ယခင်က ပင်လယ်စာနှင့်ကြက်သား၊ အမဲသားစားလျှင်ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ယခု ၄ လ အတွင်း ၆ ကြိမ် လောက်အတွင်း အဲတွေစားပြီးလျှင် အသက်ရှုကြက်လာပြီး မျက်ရည်များကြလာပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မဖြေခင် စာရေးတာကို ပြောပါရစေ။ ဆရာလုပ်ချင်လို့ မဟုတ်ပါ။ (အဲတွေ) လို့ရေးတာကို စဉ်းစားရခက်။ အစားအကြောင်း မေးတာဖြစ်လို့ ဘဲတွေလို့ရေးတာ မှားရိုက်မိသလားလို့ပါ စဉ်းစားနေရတယ်။ အဲတာတွေလို့သာ ရေးသင့်တယ်။ အသက်ရှူကြပ်လို့ ရေးသင့်တယ်။ မျက်ရည်ကျလို့ ရေးသင့်တယ်။ (ကျွန်တော့်ဒီစာကိုလည်း ပြန်မစစ်အားသေးလို့ စာရိုက်မှားတာ၊ သတ်ပုံမှားတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆောရီး)
အစားအစာစားပြီး တခုခုဖြစ်လာရင် စားခဲ့တာနဲ့ မတည့်သလား စဉ်းစားသင့်။ မတည့်တာ (အလာဂျီ) ဖြစ်နိုင်။ ပင်လယ်စာ မတည့်သူရှိ။ ကြက်သား၊ အမဲသား မတည့်သူရှားတယ်။ တိတိကျကျဆန်းစစ်သင့်တယ်။အစားနဲ့မတည့်တာ ယူအက်စ်မှာ လူဦးရေရဲ့ ၂့၅% ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာသုတေသနတော့မတွေ့သေး၊ သိပ်မကွာလောက်ပါ။
အများဆုံးမတည့်တဲ့အစာ (၈) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Peanuts မြေပဲ၊ (ကလေးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံး)၊
၂။ Shellfish (shrimp and lobster) ပင်လယ်စာတွေ၊ (လူကြီးမှာ အဖြစ်အများဆုံး)၊
၃။ Tree nuts သစ်ကြားသီး၊ ဗာဒံစေ့၊ သီဟိုစေံစတဲ့ အစေ့အဆံတွေ၊
၄။ Fish ငါး၊
၅။ Cow’s milk နွားနို့၊
၆။ Eggs ဥ၊
၇။ Wheat ဂျုံ၊
၈။ Soy ပဲပုပ်တွေကနေ အများဆုံးဖြစ်တယ်။
၉။ နှမ်းစေ့၊ မုန်ညင်းစေ့ကနေလည်းဖြစ်တယ်။ အစားအသောက်ထဲမှာ စားကောင်း၊ ကြည့်ကောင်း၊ အနံ့ကောင်းအောင် ထည့်တာမျိုးတွေကနေလည်း မတည့်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
မတည့်တာ ဘယ်လောက်ဆိုးသလည်းက မတူကြပါ။ တချို့မှာ နည်းနည်းသာခံရတယ်။ အဆိုးဆုံးက Anaphylaxis ခေါ် ရှော့ဖြစ်တာ။ အရေးပေါ် ဆေးထိုးကုသရမယ်။ အသက်အန္တရာယ်အထိစိုးရိမ်ရတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ မတည့်သလည်း၊ မတည့်တာကို ဘယ်လောက်များများ စားသုံးလိုက်သလဲ၊ အစိမ်းစားတာလား၊ ချက်ပြုတ်ကြော်စားတာလား၊ အအေးခံထားတာလား အပေါ်တွေမှာ မူတည်တယ်။ လူနာအသက်၊ စားသောက်ချိန် (အစာမရှိချိန်)၊ အစားကစုပ်ယူမှု မြန်တာလား၊ နှေးတာလား။ လူနာမှာ ပန်းနာလို၊ အလာဂျီလို ရတတ်သူလားကြည့်ရမယ်။ အလာဂျီဆိုတာ မျိုးရိုးလိုက်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ အကုန်လုံး မဟုတ်ပေမဲ့ တယောက်မကရှိတတ်တယ်။ ပန်းနာနဲ့ နှင်းကူလို ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့အနာရှိသူတွေသတိပိုထားရမယ်။
Vomiting and/or stomach cramps အန်၊ ဗိုက်နာ၊
Shortness of breath အသက်ရှူရခက်ခဲ၊
Wheezing အသက်ရှူတာမှာ စီစီ စီစီသံထွက်၊
Repetitive cough ချောင်းအဆက်မပြတ်ဆိုး၊
Shock or circulatory collapse ရှော့ရပြီး အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်၊
Tight, hoarse throat; trouble swallowing လည်ချောင်း တစ်ဆို့လာ၊ မျိုချဘို့ခက်ခဲ၊
Swelling of the tongue, affecting the ability to talk or breathe လျှာရောင်လာ၊ စကားမပြောနိုင်၊ အသက်မရှူနိုင်၊
Weak pulse လက်ကောက်ဝတ်သွေးခုန်တာ စမ်းရတာခက်၊
Pale or blue coloring of skin မျက်နှာ အသားအရေ ဖြူဖွေး ပြာနှမ်းလာ၊
Dizziness or feeling faint သတိလက်လွတ်ဖြစ်၊ မူးလဲကျ၊
အများအားဖြင့် မတည့်တာစားပြီး ၂ နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်။ တချို့ ၆ နာရီလောက်မှလာဖြစ်တယ်။ ကြာမှဖြစ်တာထဲမှာ protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) ခေါ်တဲ့ အစာလမ်းရောဂါလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ ကလေးတွေနို့ဖြတ်စမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အန်မယ်၊ ဝမ်းလျှောမယ်၊ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆားနည်းတာခံစားရမယ်။ လိုအပ်ရင် ဆေးသွင်းပေးရမယ်။ နည်းနည်းပါးပါး ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းယားတာမျိုးက မတည့်တာမဟုတ်ပဲ အစားအစာရဲ့ သဘောကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အစိမ်းစာရင် ဖြစ်တတ်တယ်။ တော်တော်တန်တန် မတည့်စေတာက ချက်ပြုတ်လိုက်ရင် ပျက်စီးစေလို့ မတည့်တာ မခံစားရပါ။
ကလေးတွေဆိုရင် ပိုသတိထားပါ။ သူက ဘာအစားအစာနဲ့မတည့်ဆိုတာ ကြိုပြောထားပါ။ သတိပေးစာကပ်ထားပါ။ အရေးပေါ် အသက်ကယ်ဆေး EpiPen နဲ့ EpiPen Jr (Epinephrine injection) ဆေးကို လက်တကမ်းမှာထားပါ။ ယူသွားပါ။ အင်းဆက်ကောင်တွေ အကိုက်ခံရရင်လည်း ဒီဆေးမျိုးပဲသုံးပါတယ်။ နောက်ပေါ် Auto-Injectors အလိုလိုထိုးပေးတဲ့ဆေးထိုးစရာရှိတယ်။ Epinephrine ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် သက်ရောက်မှုတွေကို သိထားပါ။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲစေတယ်။ ခေါင်းမူးမယ်။ တုံတုံရီရီဖြစ်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ သွေးဖိအား တက်မယ်။ နဂိုက နှလုံးရောဂါအခံရှိသူသတိထားရမယ်။
မတည့်တာကို နောင်မှာရှောင်ရတော့မယ်။ မတည့်တာ သေချာတော့သိရမယ်။ တွေ့သမျှ၊ သူများပြောသမျှ လိုက်ရှောင်နေတာ ပညာမရှိရာကျတယ်။
Shock ရှော့ခ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/shocked-country.html
Mango Skin Allergy သရက်သီးခွံ အလာဂျီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/mango-skin-allergy.html
မနေ့ကပဲ Healthy Ladies အမျိုးသမီးကြီးတွေ ကျက်သရေရှိကြပါစေစာကို တင်ခဲ့ပါတယ်။
Grace, Gracefulness ကျက်သရေနဲ့ ကျက်သရေရှိခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ဟာ အင်မတန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ချောမောတယ်၊ လှပတယ်၊ ရိုးရိုးနဲ့ယဉ်တယ်၊ တင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရောထားပြီး၊ အဲလိုချီးမွမ်းခြင်းမှာ တွယ်ကပ်မှု နည်းပါတယ်။ လေးစားမှုနဲ့ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော် အိန္ဒိယမှာနေခဲ့ရစဉ်က ဟိုစောစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဓါတ်ပုံသတင်းတွေမှာသာမြင်ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့ ပုံပန်းကို ဖေါ်ပြချက်ပေးဘို့ရာ မိတ်ဆွေဒေသခံတဦးက စကားလုံးရွေးရခက်နေတယ်။ ကျွန်တော်က ဟင်ဒီစကား မတတ်တော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောကြရတာပါ။ ကျွန်တော်ကပဲ (ဂရေ့စ်ဖူးလ်) လို့ထောက်ပေးတော့ သူဘဝင်ကျသွားတယ်။
Looking and feeling your best during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ ကျန်းမာပြီး ကျက်သရေပါရှိစေဘို့ အကြံကောင်း (၂ဝ) စာမှာလည်း ဒီစကားစုကို သုံးထားပါသေးတယ်။
Elegant လို့ပြောတာက မော်ဒယ်တို့ ဆယ်ဘီဘရက်တီတို့သာသင့်တယ်။ Charm, Delicacy, Dignity, Gentility, Grandeur, Magnificence, Nobility, Purity, Refinement, Sophistication, Splendor, Style စကားလုံးတွေကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှသာ သင့်မှန်ပါတယ်။
Tamar Myay ဆရာ့့ စလုံး နဲ့ ဆလိမ် သုံးတဲ့နေရာတွေမှာ ဒေါက်တာတွေ၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်မန်နေဂျာတွေ၊ နာမည်ရ သတင်းထောက်တွေ၊ စတဲ့လူတွေကပါ မှားနေကြတာ၊ အမှားကြာအမှန်ဖြစ်နေကြတာ။ သူတို့ရေးတဲ့ပို့စ်တွေအောက်မှာ စေတနာနဲ့ ပြင်ခိုင်းရင် အရေးမလုပ်ကြတာများတယ်။
ညတုန်းကပဲ ဆုံးမရလွယ်ကူတဲ့ ပါရမီရှိကြောင်းရေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာက အပင်မြင့်လေ လေတိုက်ခံရလေနဲ့ ပြောင်းပြန်။ အဆင့်မြင့်လေ အောက်ဆင်းရခက်လေ။ မြေကြီးနဲ့ဝေးလေ။
ကျွန်တော် အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်လောက်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အင့်း့ ငါကြီးလာရင် အိမ်မှာ စာကြည့်ခန်းလေးတခုထားမယ်။ အဲဒီအခန်းဟာ ကြမ်းပြင်အောက် တထွာလောက်ဖြစ်ဖြစ် နိမ့်ထားမယ်။ အဲတာမှ ငါဟာ ဘဝင်ခိုက်တာနည်းမယ်လို့ တွေးခဲ့တာပါ။ ကလေးတွေးပေါ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာ ဆရာဝန်သာဖြစ်လာ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်သူသာဖြစ်တာ၊ ပြည်ပနိုင်ငံကြေီးတွေမှာနေရတဲ့သူသာဖြစ်လာပေမဲ့ ခုထိ အိမ်မှာ စာကြည့်ခန်းလေး မထားနိုင်သေးပါ။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကြာလေကြာလေ တထွာမက နိမ့်နိမ့်ကျလာပါတယ်။
မနေ့က သတ်ပုံပို့စ်အောက်မှာ တစ်မရေးသင့်တာကိုရေးလို့ ပြင်ပေးတော့၊ ဟုတ်ဆရာ ပြင်ရေးတော့မယ်တဲ့။ ပြုပြင်ရလွယ်ကူသူဆိုတာ များများမရှိဘူးလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
အခုပဲ တယောက်က အစားအသောက်အောက်မှာ စာတောင်လာပြီလို့ရေးတယ်။ ဆာလို့ရေးရမယ်၊ စာဆိုရင် စာကလေး ဖြစ်သွားမယ်လို့ရေးတော့ သူကလည်း ဟုတ်ဆရာလို့ ရေးပါတယ်။ မနေ့ကအတိုင်းပဲ ပြန်ရေးပါတယ်။
လူမှုရေးမှာ ပြုပြင်ရလွယ်သူနဲ့ တရားသဘောမှာ ဆုံးမရလွယ်သူလို့ရှိတယ်။ တော်တော်တန်တန် အခံ (ပရမီ) မရှိရင် ပြင်ဘို့ မလွယ်၊ ဆုံးမရခက်တယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေပဲကြည့်။ ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေပဲကြည့်။ တချို့သာ ရသွားကြတယ်။
Dr. Tint Swe ဆရာလုပ်တဲ့အကျင့်ပါလို့ သွားရည်လို့ရေးရတယ်။ သရေဆိုရင် ဘောလုံးပွဲ။ Smile
၂။ စကားလုံးတွေမှားနေတာက မြန်မာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်လိုက်ပါခမျာ ကြေကြေနပ်နပ် မှားနေကြလိမ္မယ် ။
Tint Swe ဆရာလုပ်တဲ့အကျင့်ကပါလို့ ကျေနပ်လို့ ရေးရမယ်။ Smile
Dr. Tint Swe ပြင်လာကြတာ ဆရာသိတယ်။ ဂျာနယ်တချို့တောင် ပြင်လာကြတယ်။ ကောင်းတယ်။
အန်တီက မအိပ်ခင်ပြောတယ်။ သတ်ပုံအလွဲအမှားတွေအတွက် ခံစားချက်တွေ သိပ်ထားမနေပါနဲ့တော့။ ရမှာလည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဘာမှပြန်မပြောမိပါ။ ခံစားချက်ဆိုတာကို ခုထိစဉ်းစာနေမိတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာပါ ဆက်စဉ်းစားရအုန်းမယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျား ကျန်တော့်အသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ ပုံပါဆေးကို မျက်နှာမှာ ၃ ရက် ၄ရက်လောက် လိမ်းရင် သိသိသာသာဖွေးလာပြှး ဝက်ခြံလဲပျောက်သွားပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ အဲ့ဒီဆေးကိုစွဲလိမ်းရင် အသားအရေ ပျက်စီးတာမျိူး ဖြစ်တတ်ပါလား။ မျက်နှာမှာလိမ်းရင် အန္တာရယ်ရှိနိုင်ပါလားခင်ဗျ
၂။ ဆရာရှင့် အမည့့် (မ)။ အသက် ၃၆ နှစ်။ အိမ်ထောင် ရှိ။ သားသမီး မရသေးပါ။ Betnovate ကို မျက်နှာမှာ လူးရင် ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလည်းရှင်။ Betnovate ကိုလိမ်းတာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီ မျက်နှာကချောပြီး အဖုမရှိပါ။ ထိုဆေးကို၂–၃ ရက်လောက်မလိမ်ရင် အဖုများ နဲနဲစီထွက်ပြီး မျက်နှာကို ယားယံစေပါတယ်။ ထိုဆေးကို ဆက်လူးသင့်မလူးသင့် ဖြေကြားပေးပါရန်။ မျက်နှာရှိ အဖုများ၊ ယားယုံခြင်းများ မဖြစ်စေရန် မည်သည့်ဆေးကို သုံးသင့်ကြောင်း ဖြေကြားပေးပါရန်
၃။ သမီးရဲ့ ရင်သားဘေးမှာ အပူလောင်သလို အကောင်ကိုက်သလို အရည်ကြည်ဖု သေးသေးလေးတွေဖြစ်လို့ ဆေးလိမ်းလိုက်တာ ပျောက်သလိုရှိပါတယ်။ အကင်းတော့ မပျောက်သေးပါဘူး။ Venovate-n လိမ်းဆေးလိမ်းနေပါတယ်။ ဆရာဝန်လဲ မပြရဲဘူးဆရာရယ်။
Betnovate (ဘက်နိုဗိတ်) လိမ်းဆေးတွေဟာ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်ဝယ်လို့ရပြီး လူသုံးလည်းများတဲ့ လိမ်းဆေးဖြစ်တယ်။ Cream (ခရင်မ်) Ointment (အွိုင်းမင်းန်) Lotion (လိုရှင်း) ဆိုတဲ့ လိမ်းဆေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ပါတာက Betamethasone ဖြစ်တယ်။ အပြင်ကနေ ပေးလို့ရတဲ့ Corticosteroids (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ သုံးကြည့်ရင် ချက်ချင်းဆိုသလို ခံစားနေရတာတွေ သက်သာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိထားစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ Betnovate, Betnovate C, Betnovate N နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။
(ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဆေးဆိုတာ (အင်ဖလ်မေးရှင်း) ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေနိုင်တာတွေကတော့ (အလာဂျီ) ခေါ်တဲ့ အရေပြားကို ကလိတာ ခံစားရမှု ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ ကိုယ်ခနာရဲ့ (အင်မြူးန်-ဆစ်စတမ်) ခေါ်တဲ့ ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ အလိုလို ထုတ်ပေးတဲ့ ဓါတ်ကနေ အဲလိုဖြစ်စေတယ်။ ဒီဓါတ်တွေထွက်လာတော့ သွေးကြောလေးတွေ ကျယ်လာမယ်။ ဒါ့ကြောင့် နီရဲလာတယ်။ နဲနဲပူလာမယ်။ ရောင်လာမယ်။ ယားလာမယ်။ နာလာမယ်။ ဥပမာ Dermatitis အရေပြားနာတို့ Eczema နှင်းခူနာတို့။
အပြင်သုံးသာဖြစ်လို့ ပါးစပ်ထဲ-မျက်စိထဲ-နှာခေါင်းထဲ မဝင်စေရပါ။ မတော်တဆဝင်ရင် ရေနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ ဆေးကို အထူကြီးမလိမ်းရပါ။ ပါးပါးညီညီသာ လိမ်းရပါမယ်။ ဆေးကိုင်တဲ့လက်ကို ဆေးပြစ်ပါ။ ဆေးကြာကြာလိမ်းရင် လိမ်းတဲ့နေရာမှာ အရေပြားပါသွားစေမယ်။ (အဒြီနယ်-ဂလင်း) ကနေထုတ်တဲ့ ဟော်မုန်းထွက်တာ နည်းသွေားစေမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေရှည်သုံးတာနဲ့ ကလေးတွေကိုသုံးတာ သတိထားပါ။ မျက်နှာကိုသုံးရင် ၅ ရက်ထက် မပိုစေပါနဲ့။ ဆေးလိမ်းတဲ့အပေါ်က ပတ္တီးမစည်းပါနဲ့။
Betnovate-C Cream ထဲမှာ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုတားတာ၊ အလာဂျီရလို့ဖြစ်တာကိုသက်သာစေတာ၊ ခုခံအားကို နှိမ်ပေးတာ၊ ဗက်တီးရီးယားကိုသေစေတာ၊ ဖန်းဂတ်စ်ခေါ် မှိုကိုသေစေတာ။ လိမ်းတဲ့နေရာ အရေပြားကို သက်ရောက်စေတာတွေ ဖြစ်စေတယ်။ Betnovate N ထဲမှာ ဗက်တီးရီးယားကိုသေစေတာပါတယ်။
Health Profile of our country မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအခြေအနေ
သတင်း = မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ မွေးဖွားစဉ်ကာလ မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းက အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေ လိုအပ်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောဆိုလိုက်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ၂ဝ၁၄ စာရင်းအရ ရောဂါဖြင့်သေဆုံးရမှုပေါင်းနှင့် %
1. Stroke ဆထုပ်လေဖြတ်ခြင်း 56,224 - 14.14%
2. Influenza and Pneumonia တုပ်ကွေးနှင့်နူမိုးနီးယား 40,503 - 10.19%
3. Coronary Heart Disease နှလုံးသွေးကြောရောဂါ 30,018 - 7.55%
4. Tuberculosis တီဘီ 25,455 - 6.40%
5. Lung Disease အဆုပ်ရောဂါ 19,248 - 4.84%
6. Liver Disease အသည်းရောဂါ 15,466 - 3.89%
7. Diabetes Mellitus ဆီးချို 14,431 - 3.63%
8. Asthma ပန်းနာ 13,297 - 3.34%
9. Diarrhoeal diseases ဝမ်းလျှောရောဂါများ 11,443 - 2.88%
10. HIV/AIDS 11,390 - 2.86%
11. Other Injuries အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာ 10,074 - 2.53%
12. Kidney Disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ 9,708 - 2.44%
13. Low Birth Weight မွေးစအလေးချိန်မပြည့်ခြင်း 9,635 - 2.42%
14. Hypertension သွေးတိုး 8,863 - 2.23%
15. Violence အကြမ်းဖက်မှု 8,092 - 2.03%
16. Lung Cancers အဆုပ်ကင်ဆာ 7,535 - 1.89%
17. Road Traffic Accidents လမ်းပေါ်မတော်တဆဖြစ်မှု 7,281 - 1.83%
18. Falls လိမ့်ကျမှု 7,261 - 1.83%
19. Suicide မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှု 6,558 - 1.65%
20. Birth Trauma မွေးဖွါးစဉ်ထိခိုက်မှု 6,093 - 1.53%
21. Liver Cancer အသည်းကင်ဆာ 4,645 - 1.17%
22. Stomach Cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ 4,607 - 1.16%
23. Congenital Anomalies မွေးရာပါချို့ယွင်းမှု 4,508 - 1.13%
24. Oral Cancer ခံတွင်းကင်ဆာ 4,478 - 1.13%
25. Meningitis ဦးနှောက်အမြှေးရောင် 4,348 - 1.09%%
26. Drownings ရေနစ် 4,292 - 1.08%
27. Rheumatic Heart Disease ရူမက်တစ်နှလုံးရောဂါ 4,008 - 1.01%
28. Oesophagus Cancer အစာမျိုပြွန်ရောဂါ 3,201 - 0.80%
29. Cervical Cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာ 2,997 - 0.75%
30. Colon-Rectum Cancers အူမကြီးကင်ဆာ 2,876 - 0.72%
31. Malaria ငှက်ဖျား 2,868 - 0.72%
32. Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာ 2,791 - 0.70%
33. Peptic Ulcer Disease လေနာရောဂါ 2,575 - 0.65%
34. Malnutrition အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း 2,538 - 0.64%
35. Fires မီးလောင်ခြင်း 2,488 - 0.63%
36. Inflammatory/Heart နှလုံးရောင်ခြင်း 2,416 - 0.61%
37. Measles ဝက်သက်ရောဂါ 2,202 - 0.55%
38. Maternal Conditions စိတ်ရောဂါများ 1,909 - 0.48%
39. Leukemia လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာ 1,757 - 0.44%
40. Endocrine Disorders ဟော်မုန်းရောဂါများ 1,613 - 0.41%
41. War စစ်ပွဲ 1,538 - 0.39%
42. Lymphomas လင်ဖိုးမားအကျိတ်ကင်ဆာ 1,533 - 0.39%
43. Epilepsy အတက်ရောဂါ1,300 - 0.33%
44. Ovary Cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ 1,033 - 0.26%
45. Syphilis ဆစ်ဖလစ် 947 - 0.24%
46. Skin Disease အရေပြားရောဂါ 802 - 0.20%
47. Appendicitis အူအတက်ရောင်ခြင်း 771 - 0.19%
48. Pancreas Cancer သရက်ရွက်ကင်ဆာ 770 - 0.19%
49. Drug Use မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု 732 - 0.18%
50. Prostate Cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ 597 - 0.15%
သေဆုံးရသည့်ရောဂါများ ဖြစ်နှုန်းနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် (ဂဏန်းနည်းလျှင် ဆိုးသည်)
1. Stroke ဆထုပ်လေဖြတ်ခြင်း 153.81 - 19 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
2. Influenza and Pneumonia တုပ်ကွေးနှင့်နူမိုးနီးယား 103.89 - 38
3. Coronary Heart Disease နှလုံးသွေးကြောရောဂါ 81.69 - 100
4. Tuberculosis တီဘီရောဂါ 59.05 - 19 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
5. Lung Disease အဆုပ်ရောဂါ 54.77 - 8 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
6. Diabetes Mellitus ဆီးချိုရောဂါ 37.65 - 59
7. Liver Disease အသည်းရောဂါ 34.48 - 18 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
8. Asthma ပန်းနာရောဂါ 34.30 -2(အနီရောင် = ဆိုးသည်)
9. Diarrhoeal diseases ဝမ်းလျှောရောဂါ 25.64 - 51
10. Hypertension သွေးတိုးရောဂါ 23.80 - 32
11. Kidney Disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ 23.74 - 19
12. Other Injuries အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာများ 20.97 - 37
13. HIV/AIDS 20.67 - 52
14. Low Birth Weight မွေးစအလေးချိန်မပြည့်ခြင်း 19.43 - 34
15. Lung Cancers အဆုပ်ကင်ဆာများ 18.98 - 61
16. Falls အမြင့်မှကျခြင်း 18.03 - 11 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
17. Violence အကြမ်းဖက်မှု 15.29 - 29
18. Road Traffic Accidents လမ်းပေါ်မတောတဆဖြစ်မှု 14.56 - 97
19. Suicide မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း 13.02 - 42
20. Birth Trauma ကလေးမွေးစဉ်ထိခိုက်မှု 12.29 - 51
21. Cervical Cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာ 12.27 - 62
22. Stomach Cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ11.18 - 39
23. Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာ 11.08 - 130
24. Liver Cancer အသည်းကင်ဆာ 10.94 - 31
25. Oral Cancer ခံတွင်းကင်ဆာ 10.55 -4(အနီရောင် = ဆိုးသည်)
26. Rheumatic Heart Disease ရူမက်တစ်ရောဂါ 9.37 - 25
27. Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင် 9.20 - 43
28. Congenital Anomalies မွေးရာပါချို့ယွင်မှု 9.13 - 68
29. Drownings ရေနစ်ခြင်း 8.39 - 29
30. Oesophagus Cancer အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ 7.21 - 26
31. Colon-Rectum Cancers အူမကြီးကင်ဆာ 7.13 - 89
32. Peptic Ulcer Disease လေနာရောဂါ 6.66 - 38
33. Malnutrition အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း 6.21 - 61
34. Malaria ငှက်ဖျား 5.90 - 45
35. Inflammatory/Heart နှလုံးရောင်ခြင်း 5.87 - 109
36. Fires မီးလောင်ခြင်း 5.42 - 52
37. Measles ဝက်သက်ရောဂါ 4.42 - 13 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
38. Prostate Cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ 4.30 - 156
39. Ovary Cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ 4.18 - 86
40. Leukemia လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာ 3.84 - 86
41. Lymphomas လက်ဖိုးမားအကျိတ်ကင်ဆာ 3.72 - 113
42. Endocrine Disorders ဟော်မုန်းမူမမှန်ခြင်း 3.69 - 112
43. Maternal Conditions စိတ်ရောဂါများ 3.36 - 61
44. War စစ်ပွဲ 2.79 - 13 (အနီရောင် = ဆိုးသည်)
45. Epilepsy အတက်ရောဂါ 2.59 - 71
46. Skin Disease အရေပြားရောဂါ 2.00 - 81
47. Syphilis ဆစ်ဖလစ် 1.93 - 34
48. Pancreas Cancer သရက်ရွက်ကင်ဆာ 1.85 - 121
49. Appendicitis အူအတက်ရောင်ခြင်း 1.82 - 28
50. Bladder Cancer ဆီးအိမ်ကင်ဆာ 1.50 - 111
ကင်ဆာအမျိုးမျိုး လူတသိန်းမှာဖြစ်နှုန်း နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်
1. Lung Cancers အဆုပ်ကင်ဆာများ 18.98 61
2. Cervical Cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာ 12.27 62
3. Stomach Cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ 11.18 39
4. Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာ 11.08 130
5. Liver Cancer အသည်းကင်ဆာ 10.94 31
6. Oral Cancer ခံတွင်းကင်ဆာ 10.554(အနီရောင် = ဆိုးသည်)
7. Oesophagus Cancer အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ 7.21 26
8. Colon-Rectum Cancers အူမကြီးကင်ဆာ 7.13 89
9. Prostate Cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ 4.30 156 (အပြာရောင် = သက်သာသည်)
10. Ovary Cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ 4.18 86
11. Leukemia လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာ 3.84 86
12. Lymphomas လက်ဖိုးမားအကျိတ်ကင်ဆာ 3.72 113
13. Pancreas Cancer သရက်ရွက်ကင်ဆာ 1.85 121
14. Bladder Cancer ဆီးအိမ်ကင်ဆာ 1.50 111
15. Other Neoplasms တခြားကင်ဆာများ 1.36 136
16. Uterine Cancer သားအိမ်ကင်ဆာ 1.00 148 (အပြာရောင် = သက်သာသည်)
17. Skin Cancers အရေပြားကင်ဆာ 0.80 137
- ဆထုပ်လေဖြတ်ခြင်း၊ တုပ်ကွေးနှင့်နူမိုးနီးယား၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ တီဘီရောဂါနဲ့ အဆုပ်ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးရတာ များတယ်။
- ခံတွင်းကင်ဆာအဖြစ်များလွန်းပြီး၊ အမျိုးသမီးသားအိမ်ကင်ဆာ (သားအိမ်ဝကင်ဆာမဟုတ်) နဲ့ အမျိုးသား ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းတယ်။
- တီဘီရောဂါ၊ အဆုပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ၊ အမြင့်မှကျခြင်း၊ ဝက်သက်ရောဂါ နဲ့ စစ်ပွဲတွေကနေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတွေက အဖြစ်များအဆိုးစာရင်းထဲမှာပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ၁၉၉၃ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် (ယိုဇိုယိုကိုတာ) လာစဉ်က NLD/LA အဖွဲ့နှင့်အတူ ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာ သွားရောက်တွေ့စဉ်က ကရင်ဒုက္ခသည် လူနာများကို ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့ရစဉ်
သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးခဲ့တဲ့ ပဒေသာမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂ (မတ် ၁၉၄၈) ထ်ုထဲက သူပုန်သတင်းစာဆောင်းပါး ကောက်နှုတ်ချက်
လူထုကို နိုင်ငံရေးအရ နိူးကြားစေမှုအတွက် အရေးပါအရာရောက်ဆုံး လက်နက်တခုမှာ စာပေဖြစ်ကြောင်း မငြင်းနိုင်ကြပါ။့့
ထိုသို့ သတင်းစာဂျာနယ်ဖြင့် လူထုအုံကြွမှုကို အကယ်တိ အကျိုးထင်အောင် ဖန်တည်းပေးခဲ့သည့် ဥပမာကြီးတရပ်မှာ ဘော်လ်ရှိဗစ်ပါတီ၏ ကြွေးကြော်သံဖြစ်သော သစ္စာ ခေါ် ပရာဗ်ဒ် (Prvada) သတင်းစာပင်ဖြစ်ရာ၊ ထိုသတင်းစာကြီး။ အသုံးဝင်ပုံကို လေ့လာရန်သင့်လှပေသည်။့့
့ ညအချိန်မှာပင် ပုံနှိပ်ရက်တန်းလန်း စက်ပေါ်၌ပင် လာရောက်ဝယ်ယူကြသဖြင့် နေ့အခါ သတင်းစာရောင်းချိန်တွင် ပုံနှိပ်တိုက်၌ ထုတ်ရောင်းရန် လက်ကျန်မရှိသလောက်ပင် တခါတရံကြုံရသည်။
- လက်နက်တစ်ခုမှာ မဟုတ်။
- ဥပမာကြီးတစ်ရပ်မှာ မဟုတ်။
- တစ်ခါတစ်ရံကြုံရသည် မဟုတ်။
ဆရာ ကျွန်တော့်အဖေရွာ မင်းတိုင်ပင်ကတော့ ကျွန်တော်ဘောင်းဘီအတို အစိမ်းရောင် ဝတ်တာလေးကို ရွာကလူတွေက ဘာလို့ အစိမ်းရောင်ဝတ်တာလဲလို့ ပြောလိုက်ကြတာ။ အဲလောက်ထိအောင် အစိမ်းရောင် မုန်းနေကြတာ တွေးတာ ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
ဟုတ့့် ကာလံဒေသံ အဂ္ဃံ ဓနံ၊ ကာလနဲ့ ဒေသ ရွေးတတ်ရမယ်လို့ ဆုံးမစကားရှိတယ်။
(ဖဆပလ) ခေတ် နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲကို ငယ်ငယ်က မျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခဲ့ရဘူးတယ်။ ငယ်တော့ မှတ်မိတာဆိုလို့ အရောင်တွေပါပဲ။ အဝါရောင်နဲ့ အနီရောင်က အဓိကများတယ်။ ကြားထဲမှာ (ပမညတ) အပြာရောင်နဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကို အစိမ်းရောင် ပေးထားတယ်။ ဦးနုက ဘာသာရေးကို မဲဆွယ်ရေးလက်နက်အဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ ဘုန်ကြီးတွေရဲ့ သင်္ကန်းရောင်နဲ့ သန့်ရှင်း (ဖဆပလ) နဲ့ အဝါရောင်ကလည်း ဆင်နေသေးတယ်။ အနီရောင် တည်မြဲ (ဖဆပလ) ကို စစ်တပ်ကအားပေးတယ်။
ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဆိုတော့ အရောင်ကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ လူနာကို မစမ်းခင်မှာ မျက်စိနဲ့အရင်ကြည့်ရတယ်။ ဖျော့တော့နေရင် သွေးအားလည်းနေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် သုတေသနတခုရှိတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဖြစ်နေသူတွေ ၅ ယောက်လာရင် ၃ ယောက်က အဝါရောင်ဝတ်လာလေ့ရှိတယ်။ ဆရာဝန်အမြင်မှာတော့ အနီရောင် ဝတ်ထားရင် သွေးအားကောင်းတယ်။ အစိမ်းရောင်ဆိုတာ သည်းခြေရည်အရောင် ဖြစ်တယ်။ အလွန်ကို ခါးတယ်။ နာကျည်းခါးသီးစရာတွေကလည်း တပုံတပင်ရှိတာကိုး။ Smile!
အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးအယူအဆတခုဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့သရုပ်လက္ခဏာကို ထင်ဟပ်စေတယ်။ အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် (ဦးတည်ချက်) နဲ့ လုပ်ဆောင်မှု (ပေါ်လစီ) တွေကို ပြဋ္ဌာန်းတယ်။
အမျိုးသားစိတ်ဓါတ် အခြေခံနှစ်ချက်ရှိတယ်။ ပဌမတမျိုးက ရှေးအစဉ်အလာကိုစွဲယူထားပြီး ပြောင်းလဲလာမှုတွေအရ မွေးဖွါးရာဒေသကို အစွဲပြုတာဖြစ်တယ်။ နောက်တမျိုးကတော့ ခေတ်ပေါ်အယူအဆဖြစ်ပြီး ဖြစ်တည်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအရ တည်ဆောက်မှုပြောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးက အတိတ်ကိုအခြေခံပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ တိုင်းပြည်တခုထဲမှာနေကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ (၁) တမျိုးတည်းသော ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ရာ၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေသာရှိတာနဲ့ (၂) နောက်တမျိုးက အမျိုးအစုအများအပြားကို လက်ခံတာဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ဦးရေများတဲ့အုပ်စုကနေ လွှမ်းမိုးထားတယ်။ နည်းတဲ့သူတွေကနေ မကျေနပ်တဲ့အခါ တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်အထိဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ဟာ တိုင်းတပါးအန္တရာယ် ကြုံတဲ့အခါနဲ့ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးမှာ အသုံးချဘို့ အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးရေများတဲ့အုပ်စုကနေ လွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတာကို အခုပြန်ပြီးဆန်းစစ်သင့်ပြီ။ နှစ် ၅ဝ သမိုင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် ဗမာလူမျိုးကကြီးစိုးတယ်ဆိုတာထက် စစ်တပ်အားပြုတဲ့အစုတခုက ကြီးစိုးတယ်ဆိုတာ သိမြင်နိုင်ကြပါပြီ။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကနေ အဲလိုဖြစ်စေလိုက်တာဖြစ်တယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် စစ်တပ်တခုတည်း မဟုတ်တော့ပါ။ စစ်ထွက်တွေချည်းလည်းမကပါ။ အပေါင်းပါဆိုတာ ရာဇဝတ်မှုမှာလည်းရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိတယ်။
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးကနေ လက်နက်အဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုလိုနီ ဆန့်ကျင်ရေးကာလလို အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်နိုးကြားမှုရယ်လို့တော့ ဖြစ်မလာပဲ ဝါးအစည်းပြေသလိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ကို အဲလို တလွဲအသုံးချခြင်းဟာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်။ အဲတာကို တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဖက်က စိုးရိမ်မှုရှိမှာမှန်ပေမဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာကို မပျက်စေချင်လို့ အသံထွက်တာ သိပ်မကြားမိခဲ့ပါ။
ဗမာလူမျိုးတစုတည်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်တဲ့ (မဟုတ်တဲ့) NLD ဖက်ကတော့ ထောက်ပြနေပါကြောင်း သိစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွက် ရေးနေတာတွေဟာ နိုဝင်္ဘာ (၈) ရက်တခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပါ။ မဲတခုတည်းအတွက်လည်း သည်းသည်းမည်းမည်းရေးနေတာ မဟုတ်ပါ။ ဈေးကောင်းရမှန်းသိပေမဲ့ အမျိုးသားရေးကို ရောင်းမစားပါ။
အမျိုးသားရေးဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ရင် လွတ်လပ်ရေးရေစေနိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင် လွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးမယ်။
ခေတ်ပေါ်တွေက ပိုကောင်း ပိုမြန် ပိုသွက်တယ်။ ဖုန်းနဲ့အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့့
ခေတ်ပေါ်တိုင်းမှာ အားနည်းချက်လည်းရှိတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တော့ သတ်ပုံတွေပိုပျက်တာတော့ မငြင်းပါနဲ့တော့။ ဖုန်းထဲထည့်လို့ရတဲ့ ကီးဘုတ်အရသာ စာရိုက်နိုင်ကြတယ်။ အချိန်ကုန်မခံချင်တာလည်းပါသေးတော့ အလွယ်လမ်းပဲ ရွေးမိကြတယ်။ ပိုပြီးမှားစေတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ အရာရာဆိုသလောက် အက်ပ်တွေ ထည့်ထားနိုင်ပြီ။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်လည်းအမျိုးမျိုး။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့့
တလောက ကျွန်တော်စာကူသင်နေတဲ့ကျောင်းမှာ အမေရိကန် သမတလောင်းတွေသတင်း ဖတ်ခိုင်းတယ်။ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နာမည်လည်းပါတာပေါ့။ သိတဲ့အတိုင်း ဒေါ်နယ်ဆိုတာတော့ ပြောစရာမလို။ ထရမ့်ကိုမသိတဲ့ကျောင်းသားက သူ့ဖုန်းလေးထဲမှာ လိုက်ရှာတယ်။ Trump လို့ ရိုက်တော့ ဖုန်းအဘိဓာန်က အနီးစပ်ဆုံးစကားလုံးတွေ ရှာပေးတယ်။ ကြောင်ရှာသီးတဲ့။ ကျောင်းသားခင်ဗျာ ဘယ်လိုမှဆက်စပ်မရ၊ ဒုက္ခရောက်နေလို့ ကျွန်တော့ကိုမေးပါလေရော။ Trumpet ကိုပြောတာနဲ့ လူနာမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရတယ်။
အမှန်က Trumpet ဆိုတာ တူရိယာပစ္စည်းတခုပါ။ ကြောင်လျှာပင်ကို Indian Trumpet လို့ခေါ်ကြတယ်။ Broken Bones နဲ့ Damocles Tree လို့လည်းခေါ်တယ်။ ရုက္ခဗေဒလို Oroxylum Indicum ခေါ်တယ်။ ဟင်ဒီလို Muhudie လို့ခေါ်တယ်။ ကြောင်လျှာသီးကို Oroxylum pod လို့ ခေါ်တယ်။
ဖုန်းလေးတွေမှာ အလွယ်နဲ့ အကျဉ်းလောက်သာထည့်ပေးထားနိုင်သေးတော့ အဲလိုတွေဖြစ်ကြတယ်။ အလွယ်လိုက်တိုင်း မလွယ်ပါ။ ခေတ်ပေါ်တချို့က ပြဿနာပေါ်တတ်တယ်။ လက်လှမ်းမီတာပဲ အဟုတ်ထင်တော့တယ်။ ရှင်းပြရတာ လျှာထွက်တယ်။ ကြောင်လျှာသီးလောက် ရှည်တယ်။ Smile!
ဒေါ်စုနေမကောင်းလို့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ပုံတွေတင်နေကြတယ်။ နာရီပိုင်းတွေအလိုက သမတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဆိုအရ အစာအိမ်နဲ့ ကျီးပေါင်းတက်တာလို့သိထားရတယ်။ အဲတာဆို အစာလမ်းကြောင်း အထူးကုနဲ့ အရိုးအထူးကုတွေဆီ သွားရမယ်။ လိုသေးရင် ဖီဇီကယ်သာရာပီ။ အင်ဘက်စတီဂေးရှင်းခေါ် စစ်ဆေးးမှုလုပ်တဲ့ နေရာဌာနတွေသွားရမယ်။ ဒါက လိုနိုင်တာတွေကို အပြေးအလွှားရေးတာပါ။
ဒီစာလေးမှာ ရေးချင်တာက ဒေါ်စု အမျိုးသမီးရောဂါဖြစ်စဉ်က ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တဲ့ မိသားစုဆရာဝန်က ဒေါ်စုနဲ့အတူ တခြားနေရာဌာနတွေကို လိုက်ပို့ရတယ်။ အမျိုးသမီးဆရာဝန်တွေကို ပုံမှာမြင်ရတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်တွေချည်းသာ ဖြစ်ပါမယ်။ ဘာသာရပ်တိုင်းမှာ အထူးကုရှိတယ်။ ဘာသာရပ်တခုတည်းမှာကို ထပ်ခွဲထားသေးတယ်။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်သန်ရာ၊ ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ အထူးဖြစ်ကြရတယ်။ အဲတာမှ လိုအပ်သူလာရင် ဒိုင်းကနဲ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်။ ဆရာဝန်တွေမှ မဟုတ်ပါ။ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ အထူးကျွမ်းကျင်နေကြတာရှိတယ်။ ဥပမာ ပြည်တွင်းက ကျွန်တော့်ညီတယောက် ကုန်သည်ပွဲစားပါ။ ကျောင်းပညာမှ ဆယ်တန်းသာအောင်တယ်။ သူရောင်းဝယ်တဲ့ပဲဆိုရင် သူ့နေရာလေးတနေရာတည်းကမဟုတ် တကမ္ဘာလုံးကပဲအခြေအနေကို မှန်းဆတတ်တယ်။ မိုးလေဝသ၊ ကိန်းဂဏန်းကအစ သိနေအောင်လုပ်တယ်။
နိုင်ငံရေးမှာလည်း အထူးပြုထားကြသူတွေရှိတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးထဲက အမတ်တယောက် ဖက်ဒရယ်အကြောင်း ဘယ်အချိန်မေးမေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်။
တလောက ကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ စတိတ်ဒီပတ်မင့်ခေါ် ယူအက်စ် နိုင်ငံခြေားရေးဝန်ကြီးဌာနကို မြန်မာနိုင်ငံအရေး သွားပြောကြစဉ်က လက်ခံတွေ့တဲ့ အထက်တန်းအရာရှိဆီမရောက်ခင် အငယ်တန်းအရာရှိတွေကို၌က မြန်မာပြည်အကြောင်း လက်ဖြောက်တီးသလို နောကျေအောင် လေ့လာထားကြတယ်။
ကိုယ်သန်ရာသန်ရာမှာ အထူးပြုထားရင် အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်။ ဘယ်သူမှ အကုန်လုံးကို အထူးပြုနိုင်တာ မရှိပါ။ အပြန်အလှန် တန်ဖိုးထားကြရမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်အထွာလေးနဲ့ကိုယ် တရေးနိုးခေါ်မေး တန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။ ပဲဈေးမေးလို့ကတော့ ညစာစားတဲ့ပဲတောင်မသိပါ။ Smile!
အမေရိကန်သမတလောင်းနှစ်ဦး စကားစစ်ထိုးပွဲ ပဌမအချီ ပြီးသွားပါပြီ
ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အမေရိကန်နဲ့ မက်ဆီကို ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုဟာ တသက်တာမှာ တခုတည်းသော အဆိုးဝါးဆုံး ကုန်သွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဖက်က အရှုံးချည်းလို့ပြောတာပါ။
ကလင်တန်ကလည်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဖက်ဒရယ်အခွန်ဆောင်တာ ထိန်ချန်ကိုထောက်ပြပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
ဦးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတခါ လက်ရှိသမ အိုဘားမာရဲ့ဇာတိမြို့ ချီကာဂိုမှာ မှုခင်းတွေများလွန်းတာကို ထောက်ပြပြီး (လော-အင်-အော်ဒါ) မရှိဖြစ်နေတယ်လို့ မြန်မာပြည်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ (နဝတ) အသုံးအတိုင်း ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ကလင်တန်ကလည်း တချိန်လုံးလိုလို ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ခံစစ်ဖြစ်နေအောင် ထိုးနှက်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးဟာ တီဗွီမှန်သားပေါ်မှာ ငယ်ရုပ်တွေဆင်ထားကြတယ်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြည့်ရတာ တခါတခါ ဘီလ်ကလင်တန်နဲ့တူသလိုလို။ ဟယ်လရီကလင်တန်ကလည်း တက်ကြွ သွက်လက်နေတယ်။ သူပြောနေစဉ်မှာ ဒေါ်စုနေမကောင်းဖြစ်နေတာကို သတိရမိလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးက ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေ အလွတ်လက်တန်းပြောနိုကြတယ်။
(စီအင်အင်) ကတော့ ဒီပွဲမှာ ကလင်တန်က ၆၂% နဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ၂၇% လို့ ဆိုပါတယ်။
(ဘီဘီစီ) ကတော့ သမတကင့်ပိန်းတလျှောက်လုံး နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာ ကလင်တန်က ၄၈% နဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ၄၆% လို့ဆိုပါတယ်။
ဆရာ ကျွန်တော့်အမ ၂၉နှစ် Multiple sclerosis ရောဂါဖြစ်နေတာ ၁ နှစ်ရှိပြီဆရာ။ MRI မှာလဲ ဖြစ်တဲ့နေရာ မတွေ့ရဘူးဆရာ။ အခုတော့ မျက်စိ၂ ဖက်လုံးကွယ်သွားတာရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ ပြန်မြင်ပါ့မလားဆရာ။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာသိတာလေးတွေ အချိန်ရရင် တင်ပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
• အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ အသက် ၂ဝ နဲ့ ၄ဝ ကြား ရောဂါရှိမှန်းစသိတာ များတယ်။
• အာရုံကြောဆဲလ်လေးတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ (မိုင်လင်ရှိ) ဆိုတာ ပျက်စီးလို့ဖြစ်ရတယ်။ အဖုံးပျက်သွားလို့ အာရုံကြောရဲ့ အလုပ်တွေ နှေးကွေးတာ မလုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်လာတယ်။
• ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် အာရုံကြောဆဲလ်လေးတွေ ထိခိုက်ခံရတယ်။ ဦးနှောက်၊ မျက်စိအာရုံကြောနဲ့ ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောတွေကိုထိခိုက်စေတယ်။
• ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အတိအကျမသိရသေးပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်လား မျိုးဗီဇလားဖြစ်နိုင်တယ်။
• ခံစားရတာတွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တခါဖြစ်တာဟာ ရက်ပိုင်း၊ ရက်သတ္တပါတ်တွေကနေ လအထိကြာနိုင်တယ်။ သက်သာချိန်တွေကြာထဲမှာရှိပါတယ်။ ဖျားလို့၊ ရေပူချိုးလို့၊ စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ကနေ ရောဂါထလာနိုင်တယ်။
• ကိုယ်ကိုထိန်းနိုင်မှု နည်းခြင်း၊ ကြွက်သားတွေလှုပ်ခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ခြေလက်လှုပ်ရတာ ခက်ခဲခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ရခက်ခြင်း၊ အသေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုခက်ခြင်း၊ စတာတွေဖြဖြစ်နိုင်တယ်။
• တင်ပါးဆုံတွင်း အာရုံကြောက်ကိုထိခိုက်ရင် ဝမ်းချုပ်၊ ဆီးသွားရခက်၊ ဆီးခဏခဏ သွားချင်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ဖြစ်မယ်
• မျက်စိအာရုံကြောထိခိုက်ရင် အရုပ်နှစ်ခုမြင်ခြင်း၊ မျက်စိအောင့်ခြင်း၊ မျက်စိ သူ့အလိုလိုလှုပ်ခြင်း၊ မမြင်ရတော့ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဦးနှောက်မှာထိခိုက်ရင် စူးစိုက်မှုအားနည်း၊ ဆုံးဖြတ်တာအားနည်း၊ မှတ်ဥာဏ်နည်း၊ ဝမ်းနည်း၊ နားအကြားနည်းတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်ရင် ကျားအင်္ဂါသန်မာမှုနည်းတာနဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ စိုစွပ်မှုနည်းတာဖြစ်မယ်။
• စကားပြေတာနဲ့ဆိုင်တာကိုထိခိုက်ရင် စကားပြောလေး-နှေး၊ ဝါးရ-မြိုရတာခက်မယ်။
• အားယုတ်ခြင်းကသိသာတယ်။ ညနေပိုင်းပိုဆိုးတယ်။
• ကုသမှုနည်းတွေရှိပေမဲ့ ပျောက်မယ်လို့ အာမမခံနိုင်သေးပါ။
• အဖြစ်နှေးအောင်ပေးတဲ့ဆေးတွေကို ကြာကြာသောက်ရတယ်။
- Interferons (Avonex, Betaseron, or Rebif), glatiramer acetate (Copaxone), mitoxantrone (Novantrone), and natalizumab (Tysabri)
- Fingolimod (Gilenya )
- Methotrexate, azathioprine (Imuran), intravenous immunoglobulin (IVIg) and cyclophosphamide (Cytoxan)
- Steroids စတီရွိုက်ပေးရင်လဲ ဆိုးတာတွေသက်သာစေတယ်။
• ခံစားရချိန်မှာဖြစ်လာတာတွေ သက်သာအောင် ပေးရတဲ့ဆေးတွေကတော့
- Lioresal (Baclofen), tizanidine (Zanaflex), benzodiazepine ကြွက်သားလှုပ်တာအတွက်ဆေး၊
- Cholinergic medications တီးလမ်းမှာဖြစ်တာတွေအတွက်ဆေး၊
- Antidepressants စိတ်မူပြောင်းတာနဲ့ အမူအယာလက္ခဏာတွေအတွက်ဆေး၊
- Amantadine အားယုတ်တာအတွက်ဆေး။
• ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကတော့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ အမျိုရခက်ခြင်း၊ တွေးတော စဉ်းစားရခက်ခြင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာတွေ ခက်ခြင်း၊ ဆီးပိုက်တပ်ထားရခြင်း၊ အရိုးအားနည်းခြင်း၊ ဖိထိုင်ရာနေရာတွေမှာ အနာပေါက်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း နဲ့ သောက်ရတဲ့ဆေးရဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေရှိမယ်။
• အမျိုးသမီးဆိုရင်၊ ရောဂါဟာ အသက် ၃ဝ အောက်ရောဂါစဖြစ်ရင်၊ ခံစားရတာတွေက တခါနဲ့တခါ ကြာမှဖြစ်ရင်၊ အလားအလာကောင်းတယ်။
ခဏနေရင် (ပရက်ဆီဒင်ရှယ် ဒီဘိတ်) ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်သမတတောင်းနှစ်ဦး စကားစစ်ထိုးပွဲ (လိုက်ဖ်) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာ လာပါတော့မယ်။
နေ့ခင်းကတည်းက (ဒီဘိတ်) အမျိုးမျိုးမှာ နာမည်ရခဲ့သူတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်တာတွေ (အင်ပီအာ) ခေါ် လူကြိုက်များတဲ့ (အက်ဖ်အင်မ်) ရေဒီယိုကနေ လာနေတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေပါတယ်။
(ဒီဘိတ်) ကို စကားရည်လုပွဲလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က စကားရည်လုပွဲတွေ သွားနားထောင်ဘူးခဲ့ပါတယ်။ တခါမှတော့ ဝင်မပြောခဲ့ဘူးပါ။ နာမည်ကြီး စကားအပြောအဟောကောင်းသူတွေပြောကြတာ နာယူမှတ်သားစရာတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဘုတလင်ချစ်လေးတို့၊ ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်တို့ပြောကြာတာ ခုထိမမေ့ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ခုခေတ်စားလာတာက (တီဗွီ ဒီဘိတ်) ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေ၊ အသင်းအပင်းတွေကနေ စီစဉ်သင့်ပါတယ်။ နည်းတော့ စကားရည်လုတဲ့အခါ ပြောရဆိုရတဲ့ သဘာသဘာဝအသိ တိုးတက်လာတာနည်းမယ်။ လက်ခုပ်တီးအောင် ရွေးပြောတာထက် တက်သင့်ပါတယ်။ ရီမောစရာ ကောင်းပါတယ်။ ရသပါတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ အချက်အလက်ကို ဦးစားပေးတာပါ ဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်တင်တာမှာ ခိုင်မာမှုရှိတာမျိုး၊ တဖက်လူကို အဆင့်ရှိရှိချေပတာမျိုး၊ စကားအသုံးအနှုန်း လေးနက်ယဉ်ကျေးတာမျိုး၊ ပညာရစေတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
အဆိုးအကောင်းခွဲတာက လွယ်တယ်။ အကောင်းတွေထဲက ပိုကောင်းတာ ရွေးရတာမျိုးနဲ့ ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ လက်တွေ့ကျတာမျိုး ရွေးရတာခက်ပါတယ်။ လူရွယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာမှာ စကားရည်လုပွဲတွေကနေ အများကြီး အကျိုးပြုမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ပစ္စည်းဥစ္စာ မချမ်းသာ၊ လှူဒါန်းပေးကမ်းနိုင်တာလည်း ခပ်သေးသေးသာ။ တတ်နိုင်တာလေးတွေတော့ ရှိတယ်။ တတ်တဲ့ပညာကို ပြောတာပါ။
မနေ့က ပြည်တွင်းထဲမှာနေကြတဲ့ အသိမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်းသိရလို့ အပတ်တကုတ်ရေးထားတဲ့ ဆေးပညာစာလေးတွေကို သိသိချင်း ချတ်ဘောက်စ်ကနေ လှမ်းပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ တယောက်က ဟိုဟိုသည်သည် မြို့ကြီးတွေကို သွားလာ ပြောဟော သင်ကြားနေတဲ့သူ။ သူ့မှာ သွေးတိုးတာ အခုမှသာသိသတဲ့။ သွေးတိုးစာ သုံးပုဒ်ပို့လိုက်တယ်။ နောက်တယောက်က အညာတခွင်မှာ ဟိုဟိုသည်သည် တောရွာဇနပုဒ်လေးတွေမှာ လူမှုရေးတွေ လိုက်လုပ်နေတဲ့သူ။ သူ့မှာ ကျောက်ကပ် မကောင်းတာသိရလို့တဲ့။ ကျောက်ကပ်ကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်းစာ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေသာမကပါ ဒေါ်စုကျန်းမာရေးသတင်းနဲ့ဆက်ပြီး အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်းစာလည်း တင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်လည်း မ, စမဲ့သူတွေရှိတယ်။ တမြန်နေ့လောက်က ဆရာ့လိပ်စာပြောင်းသေးလား၊ စားစရာလေးတွေနဲ့ လက်ဖက်ခြောက် ထပ်ပို့ချင်လို့တဲ့။ သူလိုပို့ပေးသူတွေဆီကရတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်း အခုစာလေး ရေးနေတာပါ။
လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ ကိုယ်ကပေးနိုင်တာ ရှိကြတယ်။ ရလာတာလည်း ရှိကြတယ်။ သင့်ထိုက်မှသာ ပေးခွင့်နဲ့ ရခွင့် ဖြစ်မြောက်ပါတယ်။ အယူဘာသာမတူလို့ ကံလို့မပြောလည်း မှန်တယ်။ စေတနာလို့မပြောလဲ မလွဲပါ။
Merit making ကို လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တယ်။
Merit award ဆိုရင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ဆုလို့ ခေါ်ကြတယ်။
သတင်း = ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစာအိမ်နှင့် အရိုးကျီးပေါင်းဒဏ်အချို့ ခံစားနေရ
အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်း Spondylosis ဆိုတာ အရိုးအဆစ်တွေ အနိစ္စဖြစ်စဉ်သဘော ပြောင်းလဲပျက်ယွင်းလာတာမျိုးပါ။ ဖြစ်တာကတော့ အဆစ်ပေမဲ့ သူ့အနားက အာရုံကြောတွေကို ဖိမိရင် ပိုပြီး ဒုက္ခပေးတယ်။ အာရုံကြောဆိုတာက နာတာကို သိတာနဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်တာဆိုပြီး အနည်းဆုံး ၂ မျိုးရှိတာမို့ ဒဏ်ခံရတဲ့ အာရုံကြော အမျိုးအစားလိုက်ပြီး၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ နာတာ-ကျင်တာ၊ ကောင်းကောင်း မလှုပ်ရှားနိုင်တာ မျိုးတွေပါ။ ညအိပ်တုံး ခေါင်းအုံး အနေအထားမမှန်လို့၊ ဖြစ်တာကလည်း ဒါမျိုးအသေးစားဘဲ။ အုံးလွဲတယ်ခေါ်တာမျိုးပေါ့။ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိပ်တိတိကျကျ မသိရင် သီအိုရီတွေ များနေတတ်တာတွေထဲ ဒီရောဂါလည်းပါတယ်။
ကျောရိုးလို့သာ အလွယ်ပြောတာ ကျောရိုးက အရိုးတွေအများကြီး ထပ်နေတာ၊ ကြားနေရာတွေက အဆစ်တွေဖြစ်တယ်။ လည်ပင်း၊ ရင်ခေါင်း၊ ခါး၊ တင်ပါး၊ အမြီးပိုင်းတွေဆိုပြီး နေရာအလိုက် ခေါ်ရတယ်။ စုစုပေါင်း (၇ + ၁၂ + ၅ + ၅ + ၄) = ၃၃ ရိုးရှိတယ်။ ခန္ဓာဗေဒရေးပြနေတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အရိုးကျီးပေါင်းတက်တာက ဒီနေရာတွေမှာ အဖြစ်များလို့။ အရိုးတခုနဲ့တခုကြားနေရာကနေ အာရုံကြောတွေက ဘယ်-ညာ ဖြာထွက်တယ်။ အရိုး-အဆစ် မကောင်းရင် အဲဒီ အာရုံကြောတွေကို သွားဖိမိတာနဲ့ လက္ခဏာတွေရစေတော့တယ်။ လည်ပင်းနာ၊ ဂုတ်ပိုးနာ၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ လည်ပင်းတင်းတောင့်၊ လက်တလျှောက် အပ်နဲ့ထိုးခံရသလိုခံစား၊ ထုံကျင်၊ လက်ကောင်းကောင်း မလှုပ်နိုင်၊ လက်ဖျားတွေ ထုံကျင်၊ အနေအထိုင်ခက်၊ အလုပ်အကိုင်ခက်၊ အားယုတ်၊ အအိပ်ပျက်။
ဒီလက္ခဏာတွေက Spondylosis ကြောင့်အပြင် Herniated inter-vertebral disks အဆစ်ကြားအရွတ် ကျွံထွက်တာနဲ့ Fibro-myalgia and myo-fascial pain syndromes အရွတ်-ကြွက်သားရောဂါမျိုးတွေကြောင့်ပါ ဖြစ်တတ်တယ်။ လူတွေ အရွယ်ရလာရင် သူ့အလိုလို အဆစ်မြဲစေအောင် ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ အရိုးမျက်နှာပြင် ကျယ်လာတယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့ ဒီအခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာစေတတ်သေးတယ်။ အရွယ်ရရင် ဘာမှမကောင်းဘူး မဟုတ်လား။
လည်ပင်းပိုင်းဖြစ်ရင် Cervical spondylosis ခေါ်တယ်။ ခါးဖြစ်ရင် Lower back spondylosis ခေါ်တယ်။ လည်ပင်းမှာ ဖြစ်တာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများတယ်။ သမင်လည်ပြန် သိပ်မကြည့်ကြနဲ့။ လည်ပင်းမှာ ဖြစ်သူတွေဆိုရင် တက်တဲ့ ကျီးပေါင်းက အာရုံကြောကို တိုက်ရိုက် ဖိတာကြောင့် အောက်ပိုင်းတခုလုံး အားနည်းတာ၊ လမ်းသွားတာ ပုံမမှန်တာ၊ ကိုယ်ကို ဘယ်-ညာ ကောင်းကောင်း မထိန်းနိုင်တာ၊ ဆီး-ဝမ်းသွားရာ မမှန်တာတွေပါ ဖြစ်စေတယ်။ ဒါ့ပြင် ခြေတွေ လက်တွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ သွေးလျှောက်တာ ထိခိုက်လို့ (ရှော့ခ်) လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ (Paresthesia) ဖြစ်စေတတ်သေးတယ်။ သေချာအောင် X-rays နဲ့ MRI လုပ်ရတယ်။
အနေအထိုင်၊ အသွားအလာ၊ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာမို့ Lifestyle ရောဂါလို့ ဆိုရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်သူတွေ Lifestyle ပြောင်းဘို့ လိုလာတယ်။ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ကနေ ပြောင်းသင့် ပြောင်းရမယ်။ ဘေးကနေ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေက Physiotherapy ကုတာနဲ့ (NSAIDs) အနာ သက်သာဆေးတွေ ပေးတာဖြစ်တယ်။ လိုအပ်လာရင် Surgery ခွဲစိတ်ရတယ်။
တခြားနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Osteopathic manipulative medicine (OMM), massage, trigger-point therapy, chiropractic, osteopathic care and acupuncture ဆိုတာတွေ ပါတယ်။ အာယုဗေဒနည်းမှာ Mahanarayan taila ကအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုတယ်။ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်နှိပ်ပေးရတယ်။ ဆောင်းတွင်း ဆိုရင် ဆေးအဆီကို နဲနဲအပူပေးပြီးမှ သုံးရတယ်။ Guggulu ဆိုတဲ့ဆေးလည်း ကောင်းတယ်ပြောတယ်။ Simhanada guggulu ဆေးပြားကို တခါသောက် ၂-၄ ပြား၊ တနေ့ ၄ ကြိမ်ပေးတယ်။ ရေနွေး ဒါမှမဟုတ် နွားနို့ပူပူနဲ့ သောက်ခိုင်းတယ်။ ဒီဆေးက ဝမ်းနုတ်တဲ့ သဘောလည်းပါတယ်။ ဝမ်းမချုပ်စေရဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ၄ ပြားနဲ့ မရရင် ၆ ပြား ပေးတယ်။ Triphala powder ဆေးမှုံ့ ကိုလည်းသုံးတယ်။ နွားနို့ပူပူထဲ ဆေး လက်ဘက်ရည် ၁ ဇွန်းနဲ့ သကြားထည့် သောက်စေတယ်။ တပါတ် ၂ ခါကနေ တနေ့ တခါပေးတယ်။
နာတဲ့နေရာကို အပူကပ်တာ အကျိုးရှိတယ်။ သတိထားဘို့က ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကြောင့် ထုံနေတဲ့ နေရာလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အဲဒီနေရာကို အပူကပ်ရင် မလွန်စေနဲ့။ လူနာက ပူတာမသိဘူး။ တနေ့ကို နာရီဝက် လုပ်ရတယ်။ နာတဲ့နေရာတွေကို နှိပ်တာမှာ အတင်းမလုပ်ရပါ။ ပိုဆိုးစေတတ်တယ်။ အသာအယာနှိပ်ပါ။ လည်ပင်းဖြစ်တာကို အခံရခက်လို့ ဆိုပြီး ဆေးကုတာကို အတင်း မလုပ်သင့်ဘူး။ ခါးတဲ့ အစားအစာတွေ တည့်တယ်။ အေးတဲ့ ရာသီဥတု၊ အေးတဲ့ရေ ချိုးတာ၊ အပြင်းအထန် လှုပ်ရှားတာ၊ မကောင်းပါ။ လည်ပင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အလုပ်ကို နားလုပ်ပါ။ Neck collar ကော်လာ ကြာကြာတပ်ထားပါ။
ဒေါ်စုသတင်းကို စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ တင်တာ၊ ရှယ်တာတွေဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အားကျမခံရေးပါဦးမယ်။ တော်တတ်၊ ထူးချွန်၊ အောင်မြင်မှုသတင်းမျိုးကို လိုက်ပြီးတုပတာမဟုတ်လို့ အပြစ်မမြင်လောက်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ခြေကျိုးလို့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ ခရီးသွားရဘူးတယ်။ ဒေလီမှာ ကျွန်တော်က ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ စက်ဘီးတစီးနဲ့ လမ်းဆုံတခုမှာ ရှောင်ကြရင်း ဘယ်ဖက်ဒူးအောက် အရိုးတချောင်းကျိုးသွားတယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး၊ သတ္တုချောင်းထည့်ရတယ်။ သက်သာတော့ ချိုင်းထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ သွားလာရတယ်။
အဲဒီကာလမှာပဲ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာ ပြည်ပရောက်အမတ်တွေအစည်းအဝေးရှိတော့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ ရောက်အောင် သွားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ တခြားအမတ်တွေက ဟိုနေရာသည်နေရာရွှေ့တိုင်း ဝိုင်းကူတွန်းပေးကြတယ်။ ပုံထဲမှာ မန္တလေးက အမတ်-ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦး။
ကျွန်တော် ခြေထောက်ကျိုးတော့ အိန္ဒိယ အထက်လွှတ်တော် အမျိုးသမီးအမတ် (နင်မလာ ဒက်ရှ် ပန်ဒေး) က အားပေးတယ်။ ကျမလည်း ခြေကျိုးပြီးတော့ အမတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ သူက ဂန္ဒီရဲ့အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်မှာ နံပတ်တစ်။ သမတကရွေးခန့်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောတော့ အားတက်တယ်။ ရာထူးတိုးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း အသရေဖျက်ခံရတာမျိုး နည်းသွားတာပါ။
ကျွန်တော် ဆွီဒင်ကပြန်လာပြီး ချိုင်းထောက်တဖက်နဲ့နေရတုန်း၊ ဝါရှင်တန်၊ ဒီစီမှာ အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ရှိပြန်တာနဲ့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ထပ်စီးရပြန်ပါရော။ အသွားရော အပြန်ပါ လန်ဒန် ဟိသရိုးလေဆိပ်ကသွားရတယ်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ကူညီတွန်းပို့တဲ့ ဘိလပ်သား ဂျင်းတဲလ်မင်းနဲ့ အသွားရော အပြန်ပါ ဆုံရတယ်။
ယူအက်စ်အေက အပြန်မှာ တချောင်းတည်းသောချိုင်းထောက်ကို တည်းခိုတဲ့အိမ်မှာပဲ ထားရစ်ပါတော့တယ်။ ချိုင်းထောက်က လူရဲ့အရင် ယူအက်အေကို ရောက်နေနှင့်တယ်။
၁။ ဆရာရှင့် အိုက်ဆေးကို တစ်ခြားမြို့မှာသွားဝယ်တာရလာတယ်။ ည ၁၀ နာရီက့့
အိုက်ဆေးကို မသိပါ။ ဆောရီး။ အဲဒီဆေးကိုပြောတာလားလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။
အိုက် = ပူအိုက်၊ အိုက်စပ်၊
အခုပဲ နောက်တယောက် မေးတယ်။
၂။့့ အာ့တွေက စာလုံးပေါင်း အမှန်ကို ပြောတာလားဆရာ။
အဲတာလို့ ရေးရပါမယ်။ အသံထွက်ရင် (အဲဒါ) ထွက်တယ်။ (အဲဒါ) လို့လည်းရေးကြတယ်။
အဲတာ = ထိုဟာ၊ ၎င်း၊ ယင်း၊ အနှီ၊ လို့လည်းရေးနိုင်တယ်။
(အာ့) ဆိုတာ မရှိပါ။ (အ၊ အာ၊ အား) သာရှိတယ်။
အာ = ကျီးအာသီး၊ အာကြမ်းနှုတ်ကြမ်း၊ အာခေါင်၊ အာစလျှာစ၊ အာပူမှုတ်၊ အာဂန္တုဧည့်သည်၊ အာဂုံဆောင်၊ အာဇာနည်၊ အာနန္ဒာ၊ အာနုဘော်၊ အာပတ်ဖြေ၊ အာမဘန္တေ၊ အာယုကပ်၊ အာရုံကြော၊ အာရုံခံစား၊ အားတိုးဆေး၊ အာဟာရ၊ အာလိမ်ငါးဆင့်၊ အားအင်ပြည့်ဖြိုး၊ အားအင်ကုန်ခမ်း၊ အားကျ၊ အားကြီး၊ အားတက်သရော၊ အားနွဲ့သူ၊ အားပါးတရ၊ အားလျော့၊ အားသန်၊ အားနာ၊ အားမကိုး၊ အားရရွှင်လန်း၊ “အာကနဂါး၊ ရေနတ်သားသည်”
အောက်မြင့်က (၏) အစားထည့်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏၊ မောင်ဘ၏၊ စား၏၊ သွား၏၊ အရင်က (၏့) လို့ရေးခဲ့ကြတယ်။
မေးခွန်းနှစ်ခုက နမူနာတွေသာဖြစ်တယ်။ မေးခွန်း အတော်များများမှာပါတယ်။ အသံထွက်နဲ့ စာရေးတာ ခွဲခြားမသိတာတွေ များနေသလား။ သိသွားတဲ့နောက်မှာ ပြင်လိုက်ပါ။ မှန်သွားမယ်။
ဆရာ သမီးအသက် ၂၂ ပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၄ လရှိပြီ။ ပထမ ၂ လက ဆေးသောက်ပါတယ်။ နောက် ၂ လကိုဆေးဖျက်ထားတာ ခုထိ ကလေးမရသေးပါဘူးဆရာ။ အဲဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆရာ။
ဆေးဖြတ်ထားလို့ ရေးရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာလို့ ရေးရတယ်။
ဒီလိုရေးပြီးမေးတာ ဒါကနမူနာတခုသာဖြစ်တယ်။ ဒီသတ်ပုံအမှားတူ မေးသူ မနည်းပါ။ အခုမေးခွန်းအရင်က (စို့) နဲ့ (ဆို့) မှားရေး မေးတယ်။ မနေ့ကပဲ (သံ) နဲ့ (သန်) ကို ရေးရတယ်။ (ချ) နဲ့ (ကြေ) လည်းပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူဆိုသူတွေက မြန်မာစာကို မှန်ကန်တိုးတက်စီပင်အောင်လုပ်နေတာတွေ သိပ်တော့မသိလှပါ။ (တစ်) ချည်း လုပ်ခိုင်းတာ သိတယ်။ ထွက်ခွါရာပုဒ် ကြားမိတယ်။ ကျွန်တော်မသိတာတွေလည်း ရှိမှာပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ (တ) ကို (တစ်) လုပ်ခိုင်းတာက မျက်စိနောက်တာထက်တော့ မပိုပါ။ သတ်ပုံမှားလို့ မေးတာကို သဘောမပေါက်လို့ အဖြေမပေးနိုင်တဲ့ဒုက္ခ အမှန်ရှိနေပါတယ်။
အမိန့်အာဏာနဲ့ ဖျက်ထားတာတွေကို ဖြတ်ကြပါစို့။